Happy Birthday to our Lady | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aung San/Aung San Suu Kyi » Happy Birthday to our Lady	12
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 19, 2016 in Aung San/Aung San Suu Kyi | 12 comments
မွေးနေ့မင်္ဂလာ ရက်မြတ် မှသည် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း များနှင့် ပြည့်စုံပြီး လိုရာဆန္ဒများ ပြည့်ဝပါစေ။
တိုင်းသူပြည်သား အကျိုးစီးပွါး အတွက် စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ ဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ပါစေ။
We all love you so much our beloved Lady!
မြစပဲရိုး says: A Happy Long Life to you!
ဦးကြောင်ကြီး says: လော်ဘစုန်းမြည်
ပျော်ပြပြုံးသည်
မျှော်ရဦးမည်။။။
လုံမလေးမွန်မွန် says: Happy Birthday to Mother of Burma!
A Happy Long Life to You Amay Suu!
ခင်ဇော် says: အမေ ကျန်းမာပါစေ
မြစပဲရိုး says: #‎မင်းကိုနိုင်‬ (၁၉/ဇွန်/၂၀၁၆)
မြစပဲရိုး says: Thanks
ကြောင်ကြောင်၊ လုံမ နဲ့ ဇီကလေး။ :-)))
ဦးဦးပါလေရာ says: အမကြီး အတွက် ဆုတောင်းပေးတာ
တကယ်တော့ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ဆုတောင်းပေးသလိုပါပဲ..
စိတ်ထဲကတော့ ကြုံရင်ကြုံသလို အမြဲလိုလို ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေမိတယ်..။
Thint Aye Yeik says: အမေစု မွေးနေ့ကို ”နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ၇၁နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်”ဆိုပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်က လမ်းတချို့မှာ စတုဒီသာတွေ ကျွေးမွေးပြုလုပ်ကြတာတွေ့တော့ ကြက်သီးထမိ ကြည်နူးမိ
အမေစု စိတ်ရောလူပါ ကျန်းမာပါစေကြောင်းလည်း ဆုတောင်းနေမိ။
ဘေးက.. မီးမီးလေးအဖေကို တခုခုသွားကျွေးလိုက်ဦး/ ကျွေးဖြစ်လား..။
အဖေများရဲ့ အမေတယောက်.. မွေးနေ့လည်းဖြစ်သပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ က တာဝန်ရှိလာရင် တာဝန်သိ/ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားနေနေသူပါ။ (အထင်) အဝေးက ကိုယ့် အဖေ ကို တစ်ပါတ်တစ်ခါ နာရီ (ဗိုင်ဘာ တန်ခိုးပေါ့) နဲ့ချီပြီး စကားပြောနေကျပါ။
ဒီနေ့မှ ထူးပြောဖို့ မလိုသလိုဖြစ်ရော။
ဘေးက သူများ အဖေ ကိုတော့ ဒီ TED Talk လေး ပြန်မျှထားသေး။
အဲဒီလို ဖြစ်အောင် နောက်က ဒီအမေ က လုပ်ပေးနေတာရော။ အဲဒီ အဖေတွေ ကိုယ်တိုင် အဲဒီ မွေးနေ့ရှင် အမေ ကို သဲသဲလှုပ်နေမှတော့ သူကြီးမင်းရယ်။ :-))))
အောင် မိုးသူ says: ထပ်တူထပ်မျှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: အမေစု အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ
မိမိတို့မေတ္တာ စေတနာနဲ့ပို့သတာတွေကို ကျမ သိမှသိပါ့လေစလို့
စဉ်းစားတာရှိပါလိမ့်မယ်။ အမှန်ပြောရရင် အမည်တိုင်း၊ အမည်တိုင်းကို ကျမ မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ပို့သတဲ့ မေတ္တာတွေကိုတော့ အနည်းလေးမှ မကျန် ခံစားရပါတယ်။
ဒါဟာ ကျမရဲ့ ယုံကြည်ချက်ပါပဲ။ မေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့ဆုတိုင်းဟာ ထိရောက်ပါတယ်။
ကောင်းကင်ကကျလာတဲ့ မိုးပေါက်တိုင်းကို မသိနိုင်ပေမယ့်
ဒီမိုးပေါက်များရဲ့ စုပေါင်းအားနဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး စိမ်းလန်းစိုပြေသလိုပါပဲ။
များပြားလှသော မေတ္တာ၊ စေတနာရှင်များရဲ့ အားနဲ့ ရှင်သန်နေတယ်လို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။
မချမ်းသာတဲ့ ကျမတို့နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေဟာ ကျမအပေါ်မှာရက်ရောကြပါတယ်။
စေတနာက အဓိကမို့ ပေးတဲ့ လက်ဆောင် အသေးအကြီး တန်ဖိုးရှိမရှိကို ကျမ ခွဲခြားမကြည့်ပါဘူး။”